मेरो मनमा बारम्बार यो प्रश्न उठिरहन्छ– हामी जनता कि दलका कार्यकर्ता ?मस्तिष्क मन्थन गर्दा निष्कर्ष आउँछ– जनताको हैसियत हामीले गुमाइसक्यौँ । सधैँ झुटा आश्वासन छाद्ने, स्वार्थको भारी बोकेका, विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न इत्यादिहरूलाई हरेकपल्ट कुर्सी थमाउनेहरू कसरी जनता हुन सक्छन् ? जनता त ती हुन् जसले सही मान्छेलाई नेतृत्वमा पु¥याउँछन् अथवा गलत मान्छे नेतृत्वमा पुगे उसलाई गलहत्याएर सत्ताबाट च्यूत गर्ने साहस राख्छन् । सचेत जनता भएका देशमा झुटा आश्वासन छादेर सत्तामा पुगेकाहरूलाई नेतृत्वबाट हटाउन जनताले अदम्य साहसिक काम गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।
यस्तै एक घटना स्मरणीय छ– चुुनावी प्रतिबद्धता बिर्सेपछि एकपटक मेक्सिकोको ह्विक्सटान प्रदेशमा रहेको सान आन्ड्रेस पोर्टो रिको शहरका पुरुष मेयर जाभिइर जिमेनेजलाई नगरवासीले केही दिनसम्म महिलाको भेषमा शहर घुमाएका थिए । चेतनशील र साहसी नागरिकले नेतालाई यसरी पनि तह लगाउँछन् । तर, हाम्रो देशमा यिनै मेयरजस्तालाई पटकपटक कुर्सी थमाइन्छ, तिनैको देवत्वकरण गरिन्छ । तिनका विरुद्ध बोले ‘राम धुलाइ’ नखाइएला भन्न सकिँदैन । यहाँ त राम्रो गर्न पनि डराउनुपर्छ । नभए त अर्को थरीकाहरूबाट आफू जोखिममा परिन्छ ।
दलको कुरा गरिरहँदा सबैभन्दा चाख लाग्दो कुरा त के छ भने अब कोही पनि दलका कार्यकर्ता नभई रहन सक्दैन । यहाँसम्म कि स्वतन्त्र भनिएका पत्रकारदेखि वकिल र न्यायाधीशसम्म दलकै कार्यकर्ता छन् । यत्रतत्र सर्वत्र दलहरू फुले÷फलेका छन् । दलको अगाडि स्वयं मान्छे पनि गौण हुन थालेको छ । त्यो मान्छे यो दलको, यो मान्छे त्यो दलको । यसरी मान्छे नै दलको भइसेकपछि दलको हुन केही बाँकी होला त ?
यी सवाल यसकारण उब्जिएका हुन्– झुट पनि बारम्बार दोहोरिए साँचो लाग्न थाल्छ, स्वाभाविक लाग्न थाल्छ; बानी पर्छ । अहिले हामी यस्तैमा बानी परिसक्र्यौँ । सही–गलत केही नछुट्याइ दलका नेताको भाषणमा निर्धक्क ताली पिट्न सक्ने, जति वेला जहाँ जसरी भन्यो त्यसरी हाजिर भइदिन सक्न्े दलहरूप्रतिको हाम्रो यो निगाह प्रशंसा लायक छ । यति धेरै प्यार त हामीले जीवनमा कमैलाई दिएका हुन्छौँ । दलका लागि हामी परिवारभित्रै युद्ध गर्नसमेत तयार छौँ । दल हाम्रो प्राणप्रिय बनेको छ ।
हामी दलको दलदलमा यसरी फसिसक्यौँ कि त्यसबाट बाहिर निस्कन मुश्किल मात्रै होइन, असम्भव जस्तै बनिसकेको छ । मानौँ हामी ‘दल’ नामको ‘अफिम’ सेवनले थाहै नपाउने गरी लठ्ठिएका छौँ । र, हामीलाई त्यसबाट अलौकिक आनन्द प्राप्त भइरहेको छ ।